Marxaladihii Uu Soo Maray Midawgii Waqooyi Iyo Koonfur | WAJAALE NEWS
Marxaladihii Uu Soo Maray Midawgii Waqooyi Iyo Koonfur
June 26, 2017 - Written by Reporter:
Hargaysa(W,N)-Qormadan waxaynu kaga hadlaynaa midowgii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur oo in badan oo Somali ahi ogayn dhibkii loomaray midayntii labada gobol iyo marxaladihii uu soomaray toona. Laakiin ay maqleen oo kaliya waxaa midoobay Konfur iyo Waqooyi.
Waxaa kaloojira kuwa Aanba ogayn in lamidoobay.Sidaa owgeed su’aasha ubaahan in la iswaydiiyo ayaa ah.Goorma ayay midoobeen ?. Sidey umidoobeen?. Yaa mideeyey? Maxaa loolajeeday midnimada? Siduu ahaa dareenka dadku xiligaas?.
Si aan diirka uga qaadno mas,aladaan duugowday dulucda nuxurkeedana ugu qeexno bulshada Somaaliyeed oo Qabiilka,Gobolaysiga,iyo Burburku aafeeyay ayaanu qormadan diiwaankan ugu dhigay.
Waxay is dhaafsadeen G/Baarlmaanka Somaliland iyo Ra’iisul wasaarihii Somaaliya dhambaalo hambalyo iyo taageero ah ee midowga labada gobol.
In ay horumar lixada leh sameeyeen wada hadaldii googol xaadhka ahaa ee kusaabsanaa midowga labada gobol.
oo dhismayaasha oo dhan dushooda laga taagay,Taas oo tusaale iyo halku dhig u ahayd rabitaanka shacabka iyo mas uuliyiintiisuba ay u hayeen midowga.
6 dii april wuxuu ansixiyey Golihii sharci dajinta ee Maxmiyaddii Somaliland Mooshinkii lagu dalbanayey xoriyadda inta lagu jiro july dhexdeeda 1960 kii iyo inay midoobaan Maxmiyadda Somaliland (gobolada Waqooyi) iyo Somaliya (gobolada konfureed).
15 kii april 1960 kii waxaa magaalada Muqdisho soo gaadhay wafdi kasoocda Maxmiyadda somaaliland (goblolada waqooyi) oo isugu jiray Wasiiro xubno Baarlamaan si ay Heshiis ula gaadhaan xubnaha Dowladda iyo Barlamaankii Somaaliyeed unasoowda saaraan Go’aan Midowga labada Gobol Waqooyi iyo Koonfur.
Waxaa loo soo dhaweeyay si aan kal harlahayn. Kulankan ayaa ahaa mid aad u kulul markii ay isgacan qaadeen shumisna lays kulawareegay labadii daraf oo muddo dheer kala maqnaa .
Waxaa kaqayb qaatay soo dhawaynta wafdigaas Dadwayne aad u farabadan oo aanu hore loo arag isusoobaxaan oo kale.
Wuxuuna kubilowday Jawi dagan walaaltinimo,isfaham,isjacayl dhab ah ayay u wada hadleen labadii gole ee sharci Djinta Koonfurta iyo Waqooyi waxayna cod buuxa ku ansixiyeen Go’aankii Taariikhiga ahaa ee midowga labada Gobol.
Jawi ay ku dheehantahay aqoonsi iyo xurmad dhamaystiran kuwaasoo uu kudoonayo shacbiga Somalaiyeed madaxbanannida iyo midaynta labada gobol oo hadda loo yaqaano Somaaliya iyo maxmiyadda Somaaliland waxay idin ogaysiinayaan labada Gole in ay ugu dhawaaqayaan si buuxda oo sharafi kujirto 1 da july 1960 ka Dowlad hal calan leh hal madaxwayne iyo hal Baarlamaan.
Go aan kaas midowga kadib 16 april 1960 ki waxaa la sameeyay Guddi labada daraf ka kooban oo sii wada wada hadalada qaabkii loo dhamaystiri lahaa qaybta ka hadhsan howlaha midowga.
Gudigaas wuxuu ka koobnaa xubnahan:
Mudane Maxamed xaaji ibraahim Cigaal Gudoomiyaha arimaha Maxmiyaddii Somaliland in ay noqdaan labada Gudoomiye oo kala matalaya labada Guddi si ay u shir-gudoomiyaan kal fadhiyadda gudiyada.
waxaa xoga hayn loo doortay in ay u noqdaan labada gudoomiye.
Gudigani wada hadalo dheeraada kadib waxay si wadajira u soo wada saareen war murtiteedkan:
Shirkii gaarka aha ee looga wada hadlayay midaynta Gobolada Waqooyi iyo Koonfur kaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho Taariikhdu markii ay ahayd 16-22 April 1960 kii ayna kawada qayb galeen labada Guddi Barlaaman ee kal matalayey labada jaanib, wuxuu Howlihii kusoo gabagabeeyey in Talaabada kowaad oo laqaadayaa ay noqoto aas aasidda Somaliwayn,iyo in shacabka Somaaliyeed loo xaqiijiyo nabad kuwada noolaansho.
Wuxuuna gabagabadii ku heshiiyeen Qodobada soo socda:
1-iyadoo la gaduulayo cod uqaadidii labada Gole ee Somaliya iyo Somaliland,waxaaa waajib ah midaynta labada Gobol 1da July 1960 ka. Arinta ku saabsan nooca ay Dowladda Somaliyeed ee cusubi noqonaysaana uu yahay mid Diimoqraadi ah.
3-Xisbiyada hadda xukuma maamulada kajira labada Gobol waxay soo wada dhisayaan Xukuumad midnimo Qaran.
5-labada Gobol ee hoosyimaada Maamulka Maxmiyada Somaliland iyo lixda Gobol ee Hoosyimaada Maamulka Somaliya waxay noqonayaan sideeda gobol oo ay ka koobanyihiin gobolada Dalka Somaliya maamul ahaan.
6-Waxaa socda Baadhitaan iyo Daraasad lagu hayo in labaa bi’iyo ama la mideeyo hay’adaha qaarkood maamul ahaan ama lays hoos geeyo sida qaybo kamid ah maamulka,Maaliyadda,iyo Garsoorka kuwaas oo hadda ka kala shaqeeya labada Gobol.
iyo farsamo yaqaano shisheeye ,Sidaa awgeed waxay Dowladda somaliyeed ka dalban doontaa Qaramada Midoobay in ay u soo diraan khubaro ka caawisa sidi loo dadajin lahaa socodsiinta ama mel marinta midowga labada Gobol.
8-waxaa la samayndoonaa ciidan wadani ah oo uu kamid noqon doono Urur katirsan Ciidamada Maxmiyadda somaliland kaas oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in ay aas aas u noqodaan samaynta milatari Somaliyeed.
9- waxaa kaloo lagu heshiiyay in koox goob joogayaal ahi ay u raacaan London wafdiga Somaliland si ay u gala qayqaataaan wadahadalada ay la galayaan wasaaradda mustacmaradaha ee Engriiska.
Ku dhawaaqidda si wadajira baaqaan Tilmaamaya midowga labada Gobol wa
Hadaba Qormadaan aan kaga hadlayo midowgii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waxaa igu dhaliyay in aan dadbadanoo Somali ahi ogayn dhibkii loomary midayntii labada gobol iyo marxaladihii uu soomaray toona. Laakiin ay maqleen oo kaliya waxaa midoobay Konfur iyo Waqooyi. Waxaa kaloojira kuwa Aanba ogayn in lamidoobay.Sidaa owgeed su’aasha ubaahan in la iswaydiiyo ayaa ah.Goorma ayay midoobeen ?. Sidey umidoobeen?. Yaa mideeyey? Maxaa loolajeeday midnimada? Siduu ahaa dareenka dadku xiligaas?.
15 kii april 1960 kii waxaa magaalada Muqdisho soogaaray wafdi kasoocda Maxmiyadda somaaliland (goblolada waqooyi) oo isugu jiray Wasiiro xubno Baarlamaan si ay Heshiis ulagaaraan xubnaha Dowladda iyo Barlamaankii Somaaliyeed unasoowda saaraan Go’aan Midowga labada Gobol Waqooyi iyo Koonfur.
Wuxuuna kubilowday Jawi dagan walaaltinimo,isfaham,isjacayl dhab ah ayay uwada hadleen labadii gole ee sharci Djinta Koonfurta iyo Waqooyi waxayna cod buuxa ku ansixiyeen Go’aankii Taariikhiga ahaa ee midowga labada Gobol.
6-Waxaa socda Baaritaan iyo Daraasad lagu hayo in labaa bi’iyo ama lamideeyo hay’adaha qaarkood maamul ahaan ama lays hoosgeeyo sida qaybo kamid ah maamulka,Maaliyadda,iyo Garsoorka kuwaas oo hadda kakala shaqeeya labada Gobol.
Ku dhawaaqidda si wadajira baaqaan Tilmaamaya midowga labada Gobol wakhti aan sidaa u sii dheerayn, ayaa wuxuu saamayn wayn ku yeeshay Shacabka Somaliyeed meelkasta oo ay joogaanba oo muddo dheer sugayay midow iyo xoriyad dhulkooda hooyoyin sanado badan la tacaalayey sidii ay mar uun heeryada gumaysiga isaga rogi lahaayeen,Waxaa ka muuqanayay Dadka Somaliyeed farxad,rayrayn,Damaashaad waxay sameynayeen xaflado ay ugu dabaal dagayeen guushaan Taariikhiga ah ee midowga somaliya.
Waxay ku dhawaaqayeen Dadka ka khudbdaynayaa fagaarayaasha laysugu soo baxay sida:siyaasiyiinta Fanaaniinta iyo gabyaaguba,in ay gaadheen guul balse loo baahan yahay kuwa dheeraad ah,Kuwaas ah in lasoo celiyo Gobolada kale ee maqan sida: Gobolada uu farnsiiska jabuuti ,Xabashida Somaligalbeed,iyo gobolka NFD oo Engriisku siiyey Kenya si laysugu laysugu soo celiyo xidigta Calanka shanteeda geesood oo uu kala qaybiyay isticmaarku.
Waxaa bilowday howlgaladii bilowgii kacaankii shacabiga gudaha oo ay ku taageerayeen midowga iyo madaxbananida Somaaliya.
Isku soo duuboo sida ka muuqata qormadan waxaa loo soo maray xoriyadda iyo midowgaba dhib fara badan waxaa ku daatay dhiig,waxaa naftoodii ku waayay naftood hurayaal u geriyooday xoriyadda.
KALA LASOCO QAYBTA LABAAD SHABAKADA WAJAALENEWS.NET